ပြည့်စုံ: October 2009
ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်၏ (၄၇) နှစ်မြောက် မွေးနေ့ အမှတ်တရ
Pyae Sone | 4:36 AM | video | ကောက်နှုတ်ချက် | မွေးနေ့အမှတ်တရ
“ကျတော်တို့က ဒီမိုကရေစီဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုကိုဘဲ တောင့်တတယ်။ ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းသောနည်းကိုပဲ ကျတော်တို့ ရွေးချယ်မှာ ဖြစ်တယ်။”
ဖခင် ဦးသက်ညွန့် (ပန်းချီဆရာကြီး)နှင့် မိခင် ဒေါ်လှကြည်တို့မှ ၁၉၆၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ(၁၀)ရက်နေ့တွင်ရန်ကုန်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီး မွေးချင်း(၅)ယောက်အနက် တတိယယောက်မြောက်သားဖြစ်သည်။ သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ် အထက်တန်းကျောင်းတွင်တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ၁၉၈၈ ခုနှစ်ကာလတွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်(ပင်မ)တွင် သတ္တဗေဒကျောင်းသားအဖြစ်ပညာသင်ကြားခဲ့ပြီး၊ ၁၉၈၈ ခုနှစ်သြဂုတ်လ (၂၈)ရက်နေ့မှာ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ `ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်`တွင် ဥက္ကဌအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ် မတ်လ(၂၃)ရက်နေ့တွင် စစ်အစိုးရရဲ့ အဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး ထောင်ဒဏ် အနှစ်(၂၀)ကျခံခဲ့ရသည်။ ၂၀၀၄ နိုဝင်ဘာလ (၁၉) ရက်နေ့တွင် စစ်တွေအကျဉ်းထောင်မှ ပြန်လည်လွတ်မြောက်ခဲ့ပြီး ' ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့'ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ဒီမိုကရေစီအရေးတွင် ဆက်လက်လှုပ်ရှားခဲ့သည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် ဒုတိယအကြိမ် ပြန်လည်အဖမ်းခံရပြီး ၂၀၀၇ ဇန်န၀ါရီလ(၁၁)ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီး စစ်အာဏာပိုင်တို့မှ လောင်စာဆီမြှင့်တက်မှုကြောင့် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများနှင့်အတူ လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြခဲ့မှုဖြင့် ၂၀၀၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၁ ရက်နေ့ညတွင် တတိယအကြိမ် ထပ်မံဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြန်သည်။ ယခုအခါ စစ်အာဏာပိုင်များ၏ ကျိုင်းတုံအကျဉ်းထောင်ထဲတွင် ထောင်ဒဏ် (၆၅)နှစ်ကျခံနေသည်။ ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် သက်စွန့်ကြိုးပမ်း အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် ကိုမင်းကိုနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ဆုတွေက….
(၁) The John Humphrey Freedom Award(Canada) in 1999
(၂) The Student Peace Prize in 2001
(၃) The Homo Homini Award by People in Need Foundation in 2001
(၄) The civil Courage Prize 2005
(၅) The Gwangju Human Rights Award of South Korea in April 2009
ကိုမင်းကိုနိုင်ဟာ အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ ကျခံနေရပေမယ့် စစ်အာရှင်စနစ်ကို ဆန့်ကျင်နေစဲ၊ ဒီမိုကရေစီကို တောင်းဆိုနေစဲပါ….။
ကိုမင်းကိုနိုင်ပြောဆိုခဲ့သော ပြောကြားချက်များအား စုစည်းဖေါ်ပြအပ်ပါသည်။
အချိန် - 4:36 AM
Pyae Sone | 1:02 AM | Tag ပို့စ်
ညီငယ် အ အဆိပ်ခွက်ရဲ့ ပ For ပြည့်စုံ နှင့် အမ ဆုမွန်ရဲ့ Pyae Sone & ပြည့်စုံ တဂ် နှစ်ခုကို သုံးမျိုး ရေးသားလိုက်ပါတယ်။
ညီငယ် အဆိပ်ခွက်က တဂ်တဲ့ ပ For ကိုပြည့်စုံ
1.What is your name : ပြည့်စုံ
2. A four Letter Word : ပြည့်စုံချင်တယ်။
3. A boy's Name : ပြည့်စုံ
4. A girl's Name : ပုလဲဝင်း
5. An occupation : ပန်းတိမ်
6. A color : ပန်းနုရောင်
7. Something you'll wear : ပင်နီတိုက်ပုံ
8. A food : ပဲကုလားဟင်း
9. Something found in the bathroom : ပ၀ါ (မျက်နှာသုတ်)
10. A place : ပြည် ရွှေစံတော်
11. A reason for being late : ပဲကုလားဟင်းအိုး တူးသွားလို့ :P :P :P
12. Something you'd shout : ပေါက်ကွဲလာရင်မလွယ်ဘူးမှတ် @%&^*@!#@
13. A movie title : ပျဉ်းမငုတ်တို
14. Something you drink : ပဲနို့
15. A musical group : ပန့်ခ် ( Big bag)
16. An animal : - ပိုးဖလံ
17. A street name : ပြည်တော်သာလမ်း
19. The title ofasong : ပန်းချစ်သူ
20. A verb : ပြည့်စုံစေသည်။
အမဆုမွန်တဂ်တဲ့ ပြည့်စုံ နှင့် Pyae Sone
1. What is your name : Pyae Sone
2. A four Letter Word : Pray
3. A boy's Name : Pyae Sone
4. A girl's Name : Pan Phyu
5. An occupation : Packaging
6. A color : Purple
7. Something you'll wear : Patch jeans
8. A food : Pizza hut
9. Something found in the bathroom : Paper
10. A place : Peaceful quiet place
11. A reason for being late : Party at my house
12. Something you'd shout : Play dirty ! ! !
13. A movie title : Partner (Korea movie)
14. Something you drink : Pineapple juice
15. A musical group : Pooh
16. An animal : Peccary
17. A street name : Pyi street
18. A type of car: Pajero
19. The title ofasong : Peace of mind - Boston
20. A verb : : Pacify
နံမည်က - ပြည့်စုံ
ပြောချင်တဲ့စကားလေး လေးလုံးက - ပြန်ဆုံချိန်လေး
ကောင်လေးနံမည်က - ပြည်အေး
ကောင်မလေးကတော့ - ပန်းကလေး
လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်က - ပန်းဥယျာဉ်
အရောင်ထဲမှာတော့ - ပန်းဆီ
ဘာဝတ်ထားလဲဆိုတော့ - ပုဆိုး
ဘာအစားအစာကြိုက်လဲဆိုရင် - ပဲ ဟာလ၀ါ
ရေချိုးခန်းထဲတွေ့တာတော့ - ပုဆိုးပိုင်း
နေရာကတော့ - ပြည် ရွှေစံတော်မှာဆုံချင်တယ်။
ဘာဖြစ်လို့နောက်ကျလဲဆိုတော့ - ပန်းသွားဝယ်နေလို့ပါ။ (ပြောပြဘူး ဘယ်သူ့တွက်လဲဆိုတာ) :P
အော်ချင်နေတာကတော့ - ပြည်သူသာ အမိ၊ ပြည်သူသာ အဖ။
ဇတ်ကားထဲမှာတော့ - ပန်းဒဏ္ဍာရီ
ဘာသောက်ချင်လဲဆိုတော့ - ပန်းသီးဖျော်ရည်
တီးဝိုင်းနံမည်က - ပတ်ဇ်ဇဲလ် (Puzzle)
တိရစ္ဆာန်နံမည်က - ပိုးဟက်
လမ်းနံမည်ကတော့ - ပြည်ထောင်စုလမ်း
ကားက - ပရာဒို
သီချင်းလေးထဲမှာ - ပြည့်စုံလွန်း
ကြိယာထဲမှာတော့ - ပျော်ရွှင်ချင်တယ်။
အမဆုမွန်နှင့် ညီငယ်အဆိပ်အခွက်ရေ ပုံဖော်လိုက်ပြီနော်... ဆက်တဂ်ဖို့ကလည်း အားလုံးလိုလိုက ရေးသားပြီးကုန်ပြီဆိုတော့ ဆက်ပြီးမတဂ်ချင်တော့ပါဘူး...။ အခုတလော ဘယ်ရောက်ရောက် အက္ခရာတွေချည်မြင်နေရတယ်...။
အချိန် - 1:02 AM
Pyae Sone | 12:33 AM | Tag ပို့စ် | သီချင်း
တခါတလေမဟုတ် အခုတလော ခဏခဏဆိုသလိုတိုက်ဆိုင်နေတဲ့ သီချင်းလေးတွေညည်းဖြစ်နေတာ သံစဉ်တွေကတော့ ထပ်ထပ်နေတယ် လွမ်းကွဲကြေသံစဉ်တွေပေါ့…။ ကားထဲရောက်တော့ စီဒီဖွင့်ပြီး ညည်းဆိုရင်း နားထောင်လိုက်နဲ့ အလုပ်ထဲရောက်တော့ အမ်ပီသရီးလေးနဲ့ လွမ်းဆွတ်လိုက် အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ကွန်ပျူတာဖွင့်ပြီး ခံစားလိုက်နဲ့ ခံစားမှုတွေ တိုးတိုးလာသလိုပဲ…။
Big bag- ကြုံရင်ပြောပေးပါ ဒီသီချင်းလေးဟာတိုက်ဆိုင်မှုဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး… ကျနော် ဒီကိုရောက်တာလည်း တစ်နှစ်ပြည့်ပြီ ကျနော်တို့ရဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးဟာလည်း တစ်နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီပေါ့ဗျာ… ထပ်တူမကျတောင် အားလုံးနီးပါးတော့ တူနေသလိုပဲ…။
♫ ♪ ဘာလိုလိုနဲ့ တစ်နှစ်ပြည့်ပြီပဲ အရင်လိုပဲငါစိတ်နာတယ် ဒီအချိန်ပဲငါ ကြေကွဲခဲ့ ၀န်ခံချင်လည်း ဆွံ့အနေခဲ့ ငါဟာမင်းအစွန့်ပစ်ခံလည်း မြူမှုန်အချစ်တောင်ပြန်မရခဲ့ ….
♫ ♪ (လမ်းကြုံရင်ပြောပေးကြပါ ကျနော့်ရဲ့အိပ်မက်တွေမှာ သူ့ရဲ့ပုံရိပ်တွေ အမြဲတမ်း ခြောက်လှန့်လို့နေတယ်… ပြောပြလိုက်ပါ (ပြောပေးကြပါ) ကျနော့်ရဲ့စိတ်ကူးတွေဟာ သူ့ရဲ့ပုံရိပ်တွေ အမြဲတမ်းခြောက်လှန့်လို့နေတယ်….) ♫ ♪
ကျနော်လည်း နောက်လဆို အိမ်ပြောင်းရတော့မယ် တစ်နှစ်ပြည့်ပြီ စာချုပ်က အဲဒါနဲ့ ဒီသီချင်းလေက အခုတလော တိုက်ဆိုင်မှုဖြစ်နေတယ် စိတ်ကူးယဉ် အိမ်လေးပေါ့ဗျာ… ဒါပေမယ့်လည်း ဘယ်တော့ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာတော့… ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း အပြစ်မတင်ချင် ကံကိုလည်း ပုံမချချင်ဘူး… ကံဆိုတာ တကယ်တော့အလုပ်ပါတဲ့ ပြောကြတာပဲ နောက်ပြီးလောကကြီးကဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်ပေါ့…။ မျှော်လင့်ပြီး မျှော်လင့်သလိုဖြစ်မလာကြရင် ၀မ်းနည်း ကြေကွဲတတ်ကြတယ် ဒါပေမယ့်လည်း လူဆိုတာက မျှော်လင့်တတ်တဲ့ သတ္တ၀ါပဲလေ… သေချာတာတခုကတော့ ကျနော်က ပုထုဇဉ် ဆိုတဲ့ လူဖြစ်နေတော့ လိုအပ်နေအုံးမှာပါ… တောင့်တနေရအုံးမှာ မျှော်လင့်နေရအုံးမှာပါ… အိပ်မက်တွေ ဆက်မက်နေရအုံးမှာပေါ့ဗျာ.. သီချင်းလေးက ကိုအငဲရဲ့ အိမ်
♫ ♪ ♫ ♪ အခုတလောမှာ ငါမက်တဲ့ အိပ်မက်တွေ အရမ်းထူးဆန်းတယ်… မြက်ခင်းနဲ့ ခြံဝန်းနဲ့ အိမ်ကလေးကို တို့နှစ်ယောက်ပိုင်သတဲ့… ပိုက်ဆံလေးတွေ စုချင်တယ် လကုန်တိုင်းဆုတောင်းဆဲကွယ်… တို့နှစ်ယောက်အတွက် အိမ်လိုချင်တယ်… မနက်ဖြန် ဒီအခန်းက နေခဲ့တာ စာချုပ်ပြည့်တော့မယ် လက်ထဲမှာ ဘယ်မလဲငွေ ထပ်ငှားဖို့ စဉ်းစားကာနဲ့ စိတ်ညစ်လဲ ဘာထူးမှာလည်း အသက်တွေကသာ ကြီးခဲ့တယ် တို့နှစ်ယောက်အတွက် အိမ်ဘယ်မှာလည်း…
♫ ♪ (အကောင်းဆုံးနားခိုဖို့အတွက် နေရာလေးလိုချင်မိတယ် တစ်နေ့တော့ တို့နှစ်ယောက်စလုံးအတွက် လုံခြုံတဲ့အိမ်လိုချင်တယ်….) ♫ ♪ ♫ ♪
♫ ♪ တနေ့တော့ တနေ့ပေါ့… ဘယ်တော့လည်း မမေးလိုက်နဲ့ကွယ်… ဘယ်တော့မှ မဖြစ်လာဘူးလို့ အားမလျှော့ပါနဲ့ လိုက်လေဝေးလေ ပြေးနေဆဲ တို့အိပ်မက်တွေ ၀ိုးတ၀ါးရယ် တို့နှစ်ယောက်အတွက် အိမ်လိုချင်တယ်...
သိတဲ့အတိုင်း ခလုပ်ထိတော့ အမိတကြတယ်ဆိုတာ အမေ့ကိုလည်း အကြိမ်ကြိမ်သတိရနေမိတာပေါ့…။ ဝေးပြီးရင်းဝေးနေခဲ့တာ မဆုံနိုင်တဲ့အဝေးမှာ …. မျှော်လင့်တောင့်တ ကြေကွဲနေရုံမှအပ ဘာမှမတတ်နိုင်ပါ… သီချင်းလေးက ကိုထူးအိမ်သင်ရဲ့ လေလွင့်ခြင်းလမ်းမများ…
♫ ♪ အဝေးက လမ်းဟောင်းလေးကို ငါဟာနှုတ်ဆက် အမေ့ရဲ့ မျက်ရည်စက်တွေ ငါဟာ နှုတ်ဆက်
အပြာရောင်ကျောပိုးအိတ်တစ်ခုထဲ ဒဏ်ရာဟောင်းလေးကို ထည့်သွားရတော့မယ် အဆုံးမဲ့ မိုးသားထဲကို ငါပျံသန်းခဲ့ ငါ့ရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ လေလွင့်ခြင်းငှက် ဘယ်လို သွားရအုံးမှာလဲ ဘယ်မှာ အဆုံးသတ်မှာလဲ ...
♫ ♪(ရက်စက်တဲ့ လမ်းများ အဝေးမှာ ခေါ်သံတွေကြား ပြေးထွက်ခဲ့ ငြင်းမရပါလား (ရှေ့က) ရက်စက်တဲ့ လမ်းများ အဝေးမှာ ခေါ်သံများကြား လုံးဝငြင်းမရပါလား လေလွင့်ခြင်းလမ်းမများ မင်းရဲ့အနမ်းလေးများကို ငါဟာ နှုတ်ဆက် မင်းရဲ့ မျက်ရည်စက်တွေ ငါနှုတ်ဆက် ဒဏ်ရာများရဲ့အဝေးမှာ အဖြူရောင်မင်းရဲ့ ဘ၀လေး နေ….. နေခဲ့တော့….
ငါ့အတွက် ချွေးသိပ်ဖို့အိမ်ရယ် ရှိဦးမလား ငါ့အတွက်မေတ္တာတရားတွေ ရှိဦးမလား ဒါဟာ အဆုံးသတ်ခြင်းတစ်ခုလား ဒါဟာ အစပြုခြင်းတစ်ခုလား
လေလွင့်ခြင်းလမ်းမများ ( လေလွင့်ခြင်းရဲ့လမ်းမများ) ၃
အမှန်တရားတွေအတွက် စွမ်းအားတွေလိုနေတယ်… ခံနိုင်ရည်တွေလိုအပ်နေတယ် အင်အားတွေ လိုနေတယ် အနာဂတ်တွေအတွက် မနက်ဖြန်များစွာအတွက် နံနက်ခင်းများစွာလှပဖို့ရာအတွက် စွမ်းအားတွေလိုအပ်နေတာ အသေအချာပါ… ဒါကြောင့် ကျနော်နေ့တိုင်းမဟုတ်တောင် အမြဲလိုလို နားထောင်နေမိတဲ့ ကိုလေးဖြူရဲ့ အတောင်ပံတစုံရဲ့ စွမ်းအား သီချင်းလေးပါ…။
♫ ♪ မင်းရဲ့မျက်ရည် သုတ်လိုက် ဘာတွေဆုံးရှုံးခဲ့ပြီလည်း မေးလိုက်စမ်းပါကလေးရယ် မှားယွင်းမှုတွေလား ဒါအမှန်တရားလား ကိုယ်စီဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ ပြန်သုံးသပ်ပြီး အချိန်များကို ထိုးဖောက်ရင်း နင်ခံနိုင်ရည်ကိုမွေး အိုးးးး ဘ၀ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ရှာကြည့်လိုက် ဆုံးရှုံးခြင်းတွေ ဖြတ်သန်းလိုက် မင်းတွေ့ရမယ် အမှန်တရားများ မင်းရဲ့မျက်ရည်သုတ်လိုက် ရွှေရောင်အနာဂတ်ကိုကြည့်နှင့် သာယာတဲ့ မနက်ခင်းများစွာစီးဆင်းသွားလည်းပဲ ခေါင်းမော့ကြည့်လိုက်ပါ ကလေးရယ်အိပ်မက်ဆိုးတွေမကျနဲ့ နာကျင်တဲ့ခံစားချက်များနဲ့ ရင်ဆိုင်စဉ်းစားမိတာဘ၀ မင်းရဲ့စွမ်းအားများနဲ့ ရုန်းထွက်…
♫ ♪ (အိုးးးးးးးးး ဘ၀ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ရှာကြည့်လိုက် ဆုံးရှုံးခြင်းတွေ ဖြတ်သန်းလိုက် ရုန်းထွက်ရမယ့် အတောင်ပံများ မင်းယုံကြည်လိုက် မင်းသိထားတဲ့အခက်အခဲများ မှားခဲ့တာ ကမ္ဘာကြီးလား ရုန်းထွက်ရမယ့် အတောင်ပံများ မင်းယုံကြည်လိုက် စွမ်းအား စွမ်းအား ရုန်းထွက်ရမယ်…. စွမ်းအားးးးးးးးး )
ကိုဆောင်းယွန်းလရေ.. ဆောရီးပါ တော်တော်ကြာသွားတယ်ဗျာ… ကျနော်လည်း ခံစားမိသလောက်တော့ မျှဝေလိုက်တာပဲ ညည်းဆိုဖြစ်တာတော့ အများကြီးပဲ ဒီလောက်နဲ့ပဲ ကျေနပ်နိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်ဗျာ...။
အချိန် - 12:33 AM